RASMI: Kooxda AC Milan oo ku dhawaaqday saxiixa Mario Mandzukic… (Lambarkee ayuu u xiran doonaa Milan?) + SAWIRRO – Gool FM
(Milan) 19 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa ku dhawaaqday saxiixa Mario Mandzukic.
Kooxda iyo Weeraryahankan ayaa la isla meel dhigay heshiis ku eg illaa iyo dhammaadka xilli ciyaareedkan, kaasoo uu qiyaar u haysto in heshiiskiisa lagu kordhin karo hal sano oo kale.
Mario Mandzukic oo dhashay 21-ka bishii May ee sanadkii 1986 ayaa xirfaddiisa heerka sare ee ciyaareed waxa uu ka soo bilaabay NK Marsonia sanadkii 2004 ka hor inta uusan ku soo biirin NK Zagreb iyo GNK Dinamo Zagreb.
Xagaagii 2010-kii waxa uu u soo dhaqaaqay Jarmalka waxaana uu ku biiray Wolfsburg, isagoo u ciyaaray 60 kulan isla markaana uu u dhaliyey 20 gool iyo Bayern Munich oo 88 kulan uu u ciyaaray uu u dhaliyey 48 gool.
Fasal ciyaareedkii 2014/15 waxa uu aaday Atletico Madrid isagoo u dhaliyey 20 gool 43 kulan oo uu u saftay ka hor inta uusan ku soo biirin Juventus.
Shan xilli ciyaareed oo uu ka tirsanaa Juventus waxa uu u saftay 162 kulan, waxaana uu u dhaliyey 44 gool.
Bishii Janaayo ee sanadkii 2020 waxa uu ku biiray Kooxda ka dhisan dalka Qatari ee Al-Duhail waxaana uu u dhaliyey hal gool 7 kulan oo uu u saftay.
Mandžukić ayaa ku guuleystay 24 koob oo ay ku jiraan 1 UCL, 1 UEFA Super Cup, 1 FIFA Cup World Cup, 9 championship iyo 12 national Cup iyo Super Cup.
Waa ciyaariyahanka labaad ee ugu goolasha badan abid xulka qaranka Croatia, isagoo dhaliyay 33 gool 89 kulan oo uu saftay.
Weeraryahankan waayeelka ah ee Mario Mandzukic ayaa Kooxda AC Milan u xiran doona lambarka 9-aad.